Qiyaasta Gaaska Cagaaran ee NOAA ayaa kordhay 40% Ilaa 1990 | Saadaasha Shabakadda
Gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ayaa muhiimad weyn u leh nolosha dhulka; Si kastaba ha noqotee, sababtoo ah sii deynta joogtada ah ee gaasaska sida kaarboon laba ogsaydhka ama methane, cimilada ayaa wax badan iska beddelaysa meeraha oo dhan. Si loo isku dayo in loo xakameeyo, noolaha kala duwan waxay haysaa diiwaanka xogta cimilada ee ka caawisa khubarada saadaasha hawada inay sameyaan saadaalin sii kordheysa oo sax ah, tusaale ahaan NOAA Greenhouse Gas Index, oo ku saleysan xogta jawiga, waxay u adeegtaa in la ogaado waxa ku dhacaya cimilada hadda .
Iyo waxa dhaca ma fiicna: gaasaska aqalka dhirta lagu koriyo ayaa kordhay 40% intii u dhaxeysay 1990 iyo 2016.
1 Waa maxay saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo?
2 Waa maxay saamaynta kuleylka adduunka?
Waa maxay saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo?
Saamaynta aqalka dhirta lagu koriyo waa sare u kaca heerkulka ka dhashay isku soo uruursiga gaasaska kuwaas oo ah uumiga biyaha (H2O), kaarboon laba ogsaydhka (CO2), methane (CH4), nitrogen oxide (NOx), ozone (O3) iyo chlorofluorocarbons (CFCs).
Marka falaadhaha qorraxdu ay gaaraan dhulka si dhakhso ah ayay dhulka u kululaadaan, maaddaama jawigu yahay mid aad u daahfuran iftiinka muuqda laakiin aad uga yar shucaaca infrared. Mar alla markay taabtaan dhulka dushiisa, way samaystaan waxay soo saartaa fallaadho infrared infrared ah oo inta badan jawigu cabayo.
In kasta oo xaddiga tamarta hawada loo sii daayaa ay la mid tahay tan la nuugo, dusha sare ee dhulku waa inuu gaadho heerkulka uu labada socda u siman yahay, oo ah 15ºC celcelis ahaan.
Haddii saameyntan aan la soo saarin, waxaan leenahay celcelis ahaan heerkulka dhulka -18ºC. Laakiin haddii uruurinta gaaska aqalka dhirta lagu koriyo ay sii kordhayaan, cawaaqibka ka dhalan kara isbeddelka cimilada ayaa noqon kara mid aad u xun, Maaddaama celceliska heer kulka uu kici doono oo keliya. Nasiib darro, taasi waa dhab ahaan waxa dhacaya.
Saamaynta kululaynta adduunku way badan tahay oo way kala duwan tahay, kuwaasna waxaan ka heli karnaa:
Cudurku wuu faafaa
Duufaano xoog badan
Hirar kuleyl xoog leh
Dabargoynta noocyada xoolaha iyo dhirta
Sare u kaca heerarka badda
Duufaanada ugu halista badan
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha Shabakadda » Sicirka Gaaska ee NOAA wuxuu kordhayaa 40% ilaa 1990